Mepụta PDF na nseta ihuenyo na enyemaka nke Automator | Esi m mac
Mepụta PDF na nseta ihuenyo site na enyemaka nke Automator
Maka ndị na-amaghị, Automator bụ ngwa nke bi na Macs anyị na nsụgharị ndị mbụ. Ọ bụ ezie na maka ndị ọrụ novice, ọ nwere ike ịdị ka ngwa zuru oke, na-enwechaghị ihe ọmụma na echiche, anyị malitere ngwa ngwa iji ya. Na nchịkọta, A na-eji ya na usoro ihe omume ka anyị Mac kpere ha na sekọnd nakwa na ọ ga-ewe oge ma ọ bụrụ na anyị ejiri aka anyị mee ya. Taa, anyị ga-amata otu esi esonye ọtụtụ nseta ihuenyo ma ọ bụ onyonyo n'ime otu akwụkwọ, n'otu akwụkwọ PDF site na enyemaka nke Automator.
Ihe mbụ ga-abụ ịgba ọsọ ngwa ngwa Automator. Anyị na-achọta ya na Launchpad, n'ime folda ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịchọghị ịjụ ajụjụ, ị nwere ike ịchọọ ya na ntanetị, na-abanye Akpaaka.
Oge izizi ọ na-agba ọsọ, menu na-egosi ọrụ nke ịchọrọ ịmepụta, ma ọ bụ mepee akwụkwọ dị ugbu a. Anyị na-amalite na mepee akwụkwọ dị adị. A ga-eji ọrụ a mgbe anyị mepụtara usoro ma chọọ iji ya mee ihe ozugbo. Dịka anyị enweghị usoro emere, anyị ga-eke nke anyị.
Pịa na Oru oru wee Họrọ. Ugbu a interface Automator mbụ na-emepe, ebe anyị na-ahụ ogidi abụọ n'aka ekpe na ohere buru ibu n'aka nri. Ugbu a, anyị ga-pịa usoro mbụ na kọlụm mbụ, nke ga-abụ Faịlụ na nchekwa site na ọbá akwụkwọ ọba akwụkwọ. Na kọlụm nke abụọ, nhọrọ ọhụrụ ga-apụta. Chọọ na họrọ Nweta ihe achọpụtara. Pịa na ya ma ọrụ ahụ ga-aga n'akụkụ aka nri.
Gaa na kọlụm nke mbụ wee chọta PDF. Mgbe a na-agbanye ya, kọlụm nke abụọ na-achọ New PDF si oyiyi ma pịa ya ọzọ. Ugbu a, ị ga-enwe ọrụ abụọ ahụ n'akụkụ aka nri nke na-enweghị oghere na mbido.
A na-emepụta usoro ọrụ gị. Ma olee otu esi eji ya? Bugharịa ihuenyo ma ọ bụ ihe oyiyi ka rektangulu nke Nweta ihe achọpụtara ma ọ bụ pịa tinye ma họrọ ha. Ugbu a, họrọ na New PDF si oyiyi otú ị chọrọ ihe oyiyi na-positioned. Nwere ike ịhọrọ oke ugbu a, peeji zuru ezu, ma ọ bụ obosara zuru oke. Họrọ ọrụ ịchọrọ.
N'ikpeazụ, Pịa na ọsọ ma n'otu ntabi anya ị ga-enwe PDF kere gị na ọnọdụ ahọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Mepụta PDF na nseta ihuenyo site na enyemaka nke Automator
Ihe karịrị ndebiri 200 maka iWork na ọnụahịa mkparị na obere oge
Apple weputara nwelite ohuru iTunes, onu ogugu 12.6.1